कोभिड १९ को महामारी र विश्व पर्यटन दिवस | eAdarsha.com
कोभिड १९ को महामारी र विश्व पर्यटन दिवस
आज ४१ औं पर्यटन दिवस ! सन् १९७० सेप्टेम्बर २७ का दिनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व पर्यटन संगठनको स्थापनासँगै सो दिनको संस्मरणमा सन् १९८० देखि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाउन थालिएको हो । विश्व पर्यटन दिवस मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो । विश्व पर्यटन दिवसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर यो वर्ष कोभिड १९ को महामारीले गर्दा विश्वभरका पर्यटक र पर्यटन व्यवसायीहरुले ठूलो आर्थिक मारको सामना गर्न परेको छ ।
कोभिड १९ को महामारीबाट अहिले विश्व नै कोकाहलमय बनेको छ । महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस फैलिने क्रम जारी छ भने यसको प्रभाव कहिलेसम्म रहने, कति जनसंख्या प्रभावित हुने, कतिले ज्यान गुमाउनुपर्ने, रोग नियन्त्रणका लागि स्थायी उपचार विधि कहिले पत्ता लाग्ने कुनै आँकलन अहिले सम्म भएको छैन् । मानव इतिहास हेर्ने हो भने पटकपटक विभिन्न प्रकारका मानवीय संकटहरु उत्पन्न हुँदै आएका छन् । विभिन्न मानवीय संकटबाट ठूलो परिमाणमा मानवीय क्षति हुने गरेको छ । खासगरी प्राकृतिक प्रकोप, युद्ध, भोकमरी तथा महामारी आदिका कारण कैयौँ मानिसले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको दर्दनाक इतिहास पढ्न सकिन्छ । मानव चेतनशील हुँदाहुँदै पनि कतिपय अवस्थामा मानवकै गतिविधिले पटक–पटक मानवलाई महामारीले मृत्युमा पु¥याएको छ । तर पनि कतिपय महामारी मानवबाट नै नियन्त्रण भएका छन् ।
चोभारको गल्छी काटेर पोखरीको रुपमा रहेको काठमाडौंलाई मानव बस्ती योग्य बनाउने मञ्जुश्री नेपालमा पहिलो पटक पर्यटकको रुपमा आएका विदेशी मानिन्छन् । सन् ५९२ मा राजा अंशुवर्माकी छोरी भृकुटीले तिब्बतमा बिहे गरेर जानु नेपालबाट बाहिरिएको पहिलो पर्यटक मानिन्छ । तर पर्यटन अवधारणा भने सन् १९५३ मा सर एडमण्ड हिलारी र तेञ्जिङ नुर्बु शेर्पाले सगरमाथाको सफल आरोहणपछि पर्वतारोहण कार्यको वृद्धिसँगै विकसित भएको हो ।
नेपालको वायुसेवाले ६ महिनापछि आंशिक रुपले खुलेको छ । हवाई सेवा खुलेसँगै लामो समयदेखि विभिन्न स्थानमा थन्किएर बसेका पर्यटकहरुलाई विभिन्न मुलुक र नेपालका जिल्लाहरुमा आवत–जावत गर्न सजिलो भएको छ । सार्वजनिक यातायातका साधन सडकमा गुड्न थालेका छन् । तर पनि पर्यटकहरुलाई भ्रमणमा निस्कन जोखिम पनि उत्तिकै छ । कोभिड सक्रमणलाई हवाई सेवाको माध्यमबाट फैलन नलिन अहिले युरोपियन मुलुकलगायत विश्वका अधिकांश राष्ट्रहरु अत्यन्तै संवेदशील देखिएका छन् । प्रत्येक मिनेटमा उडान भर्ने विश्वका अत्यन्त व्यस्त संघाई, दुबई, पेरिस, हिथ्रो र हङकङ जस्ता विमानस्थलहरुमासमेत कोभिड महामारीका कारण अत्यन्त न्यून उडानहरु हुने गरेका छन् । जेजति उडान भएका छन् ती उडानहरुलाई सुरक्षित कसरी बनाउने भन्नेबारे सरोकारवालाहरु जिम्मेवार र संवेदनशील देखिएका छन् । विश्व पर्यटन दिवस पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण पर्व हो । यस्तो अवस्थामा यो वर्षको विश्व पर्यटन दिवस केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ ।
नेपाल एउटा पर्यटकीय गन्तव्य हो, हिमश्रृखलाहरु, मनोरम हरियाली, जैविक अनि सांस्कृतिक विविधता र बुद्धभूमि नेपालको गहना हो । हरेक वर्ष नेपालको हिमायलमा रमाउन, हिमालहरु आरोहण गर्न, पदयात्रा गर्न, धार्मिक पर्यटन गर्न अनि अन्य विभिन्न कुराहरु अवलोकन गर्न लाखौँ पर्यटकहरु नेपाल आउने गर्दछन् । पर्यटन एक गतिशील क्षेत्र र व्यवसाय हो । यो क्षेत्रमा त्यतिकै मात्रामा चुनौतीहरु पनि छन् । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा अनगिन्ती अवसरहरु रहेका छन् । समग्रमा पर्यटन क्षेत्र अवसर र चुनौती पनि हो । माउन्टेनियरिङ, जलयात्रा, धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन जस्तै कैयौँ आयामहरु पर्यटन क्षेत्रमा छन् । तर पनि हामी नयाँ–नयाँ प्रविधिमा परिष्कृत छैनौँ । हाम्रो पर्यटन आन्तरिक चुनौतीमा नै अल्झिएको छ । हाम्रो सम्पदा भित्र रहेका पर्यटनका लागि नयाँ गन्तव्यहरुको खोजी गर्ने र तीनलाई प्रवद्र्वन गर्ने काम भएका छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
पर्यटकीय दृष्टिबाट हेर्ने हो भने नेपाल पहिलो नम्बरमा आउँछ । सगरमाथा र बुद्धको जन्मथलोको रुपमा नेपाल विश्वमा नै परिचित छ । विश्वभर करीव ५३ करोड बौद्ध धर्मावलम्वी रहेका छन् । ५३ करोडमध्ये पनि करीव ५० करोड संख्या त एशियाका १० देशका नागरिक छन् । ती देश नेपालबाट केही घण्टाको हवाई दूरीमा रहेका छन् । एशियाबाट मात्रै बौद्ध धर्मावलम्वीहरु ०.२ प्रतिशत पर्यटकका रुपमा भित्र्याउन सक्ने हो भने करीव १० लाख पर्यटकको आगमन एशियाबाट मात्र पु¥याउन सकिन्छ । जुन असम्भव पनि छैन, किनकि बौद्ध धर्मका प्रणेता भगवान् बुद्धको जन्मभूमि नेपाल हो । नेपाल विश्वमा रहेका कुनै पनि देशहरुसँग तुलना गर्न नमिल्ने भूपरिवेष्ठित मुलुक हो । यहाँको जैविक विविधता, प्राकृतिक सौन्दर्य, भाषिक सांस्कृतिक एकता, तराई, पहाड र हिमालको छुट्टाछुट्टै वातावरणीय विविधता, अतिथि देवो भवःभन्ने यहाँका मानिसहरुको संस्कार, परिवेश अनुपम रहेकाले बाह्य पर्यटकहरुको मन लोभ्याउने गर्दछ ।
नेपालमा सन् १९५३ मा तेन्जिङ शेर्पा र हिलारीले सगरमाथा आरोहण गरेपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्रले चर्चा पाउन थालेको हो । त्यसपछि विश्वका पर्यटकको ध्यान नेपालका हिमालले खिच्यो । पर्यटन विकासको क्रममा नेपालमा सन् १९७६ मा पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना भयो र वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रहरुको घोषणा भयो । त्यसपछि जैविक विविधताका आधारमा नयाँ पर्यटकीय स्थलहरु पहिचान गरी प्रचारप्रसारसमेत भएको छ । नेपाल भित्रिने कुल वाह्य पर्यटकहरु मध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत पर्यटक संरक्षित क्षेत्रभित्र रहेको जैविक विविधता हेर्न आउँछन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, सीमसार तथा अन्य संरक्षित क्षेत्रमा जाने हरेक वर्ष बाह्य पर्यटकहरुको संख्या बढ्न थालेको छ । विश्वसम्पदा सूचीमा चितवन, सगरमाथा जस्ता संरक्षित क्षेत्र पर्न सफल भएका छन् । विश्वका उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य भनेर चितवन, सगरमाथा, बर्दिया, शुक्लाफाँटालगायतका क्षेत्र सूचीकृत भएका छन् । यी क्षेत्र जैविक विविधताका धनी क्षेत्र मानिन्छन् ।
पर्यटक को हो ? कसलाई पर्यटक भन्ने ? पर्यटन शब्दको शाब्दिक अर्थ भ्रमण हो । एक स्थानबाट अर्को स्थानहरुमा गरिने भ्रमणलाई पर्यटन भनिन्छ । यसरी देश विदेश भ्रमणले संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, रहनसहन मात्र होइन पृथ्वीको जैविक विविधताकोसमेत अध्ययन हुन्छ । यो बाहेक भ्रमणबाट पर्यटकको रुचि अनुसार ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं धार्मिक स्थलहरुको पनि अध्ययन भ्रमण एवं अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । नेपालमा पर्यटकहरु केका लागि भ्रमणमा आउँछन् त ? भ्रमणका उद्देश्य फरक हुन सक्छन् । तीमध्ये प्रमुख उद्देश्य भनेको मनोरञ्जन र जैविक विविधतामा रमाउने हो । पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका अनुसार नेपाल आएका पर्यटकमध्ये धेरै प्राकृतिक दृश्य अवलोकन र मनोरञ्जनका लागि आउने गर्दछन् । यसबाट के थाहा हुन्छ भने जुनसुकै भूगोलमा रहने मानिस भएपनि भ्रमणको एउटा पक्षभित्र जैविक विविधता पर्दछ । बाह्य पर्यटकले भ्रमण गर्ने स्थानमा चितवन, शिवपुरी, बर्दिया, सगरमाथा, शुक्लाफाँटा, रारा, खप्तड, कोसीटप्पु, लामटाङ, अन्नपूर्ण, पोखरा, ढोरपाटनदेखि लिएर पर्यटकहरुले मन पराउने गन्तव्य जैविक विविधता भएका क्षेत्र बढी छन् । किनभने संसारमा लोप भइसकेका र लोप हुन थालेका वन्यजन्तु, वन, वनस्पति अझै नेपालमा सुरक्षित छन् ।
राणाकालीन समयमा नेपालमा राजकीय भ्रमण बाहेक कुनै पनि विदेशीहरुलाई नेपाल भ्रमणको अनुमति थिएन । पछि रुसी पर्यटक बोरिस सिसानेबीचले थोमस कुक एण्ड सनमार्फत नेपालमा विदेशी पर्यटकहरु ल्याउन अनुमति पाए । बोरिसलाई दिइएको यो अनुमतिले नेपालमा बाह्य पर्यटक नेपाल भित्रिन शुरु भएको हो । सन् १९५० मा फ्रेन्च नागरिक मरिस हर्जोग र लुइस लाकनलले अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरे । लगत्तै सन् १९५३ मा तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारी सगरमाथाको चुचुरो पुग्न सफल भए । संसारमा १४ ओटा ८ हजार मिटर भन्दा माथि उचाइका हिमालहरु छन् । त्यसमध्ये ८ ओटा हिमाल नेपालमा छन् भन्ने कुरा पत्ता लागेपछि नेपाल पर्वतारोहणको प्रमुख गन्तव्य बन्न थाल्यो । हिमाल आरोहणका लागि पनि नेपाल उत्कृष्ट गन्तव्य भएको छ । विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमै छ ।
पर्यटन शब्दको उत्पत्ति फेन्च शब्दबाट भएको मानिन्छ । सामान्य अर्थमा पर्यटन पर्यटकको माध्यबाट सञ्चालन गरिने व्यवसाय हो । पर्यटक भन्नाले विभिन्न किसिमका उद्देश्यहरु राखी देशको भौगोलिक सीमानाभित्र वा बाहिर भ्रमण गर्ने व्यक्ति बुझिन्छ र ती व्यक्तिहरुका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउने प्रायोजनले स्थापित व्यवसायलाई नै पर्यटन व्यवसाय भनिन्छ । संसारमा फ्रान्सपछि बढी पर्यटक जाने अर्को देश अमेरिका हो । अमेरिकाले सन् १८५० मा योेसेमिट राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना गरेको थियो । वन्यजन्तु र झरनाहरुको कारणले यो १८ औं शताब्दीमा विश्वचर्चित भयो । आज वार्षिक ३७ लाख पर्यटकले यो राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमण गर्छन् । सन् १८६० मा अमेरिकाले अमेरिकाका प्रमुख शहरहरु जोडने अत्याधुनिक रेलमार्गको विकास ग¥यो । त्यसपछि मानिसहरु त्यसबेला रेलमार्ग हुँदै सो राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमण गर्न लालायित भए । यसपछि अमेरिकाले बुझ्यो भौतिक विकासबाट पर्यटकीय गन्तव्यहरुको सहज पहुँच बनाउनु नै पर्यटन विकास हो ।
प्राचीनकालमा सबैभन्दा पहिले भ्रमणका लागि निक्लने यात्रीहरुमा फेनोसियनहरुको नाम आउँछ । विश्व पर्यटनको इतिहासमा यिनीहरुलाई नै आधुनिक पर्यटका रुपमा परिभाषित गरिएको छ । विश्व पर्यटनका क्षेत्रमा अठारौं शताब्दीलाई पर्यटनको सुनौलो युग मानिएको छ । विशेषगरी सन् १९४३ देखि सन् १९७३ सम्मको ३० वर्षको अवधिमा यात्राका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको मानिन्छ । चोभारको गल्छी काटेर पोखरीको रुपमा रहेको काठमाडौंलाई मानव बस्ती योग्य बनाउने मञ्जुश्री नेपालमा पहिलो पटक पर्यटकको रुपमा आएका विदेशी मानिन्छन् । सन् ५९२ मा राजा अंशुवर्माकी छोरी भृकुटीले तिब्बतमा बिहे गरेर जानु नेपालबाट बाहिरिएको पहिलो पर्यटक मानिन्छ । तर पर्यटन अवधारणा भने सन् १९५३ मा सर एडमण्ड हिलारी र तेञ्जिङ नुर्बु शेर्पाले सगरमाथाको सफल आरोहणपछि पर्वतारोहण कार्यको वृद्धिसँगै विकसित भएको हो । सन् १९६० को दशकमा यूरोपेली देशहरुमा लागूपदार्थ ओसारपोसार र सेवनविरुद्धको कानूनहरु ल्याउने लहरै चल्यो तर नेपालमा भने यो कानून सन् १९७३ मा मात्र आयो । यसबीच युद्धविरुद्ध मत जाहेर गर्ने यूरोपेली युवाहरु यूरोपका तर्की, मध्यपूर्वका रशिया र इरान हुँदै नेपालको काठमाडौं र भारतको गोवाजस्ता क्षेत्रहरुमा स्वतन्त्रपूर्वक गाँजा खान आउन थाले । यूरोपतिर यस मार्गलाई त्यसबेला हिप्पी ट्रेल/गाँजाको मार्ग भनेर समेत चिनिन्थ्यो । त्यसबेला नेपाल गाँजा खान स्वतन्त्र देशको रुपमा पनि चिनियो, हाल नेपाल पर्वतारोहणको केन्द्र भनेर चिनिन्छ ।
भूपरिवेष्ठित देशका मानिस समुन्द्र देख्दा रमाँउदछन अनि सामुन्द्रिक भूगोलका मनिसहरु हिमाल र पहाड देखेर रमाउँदछन् । यो मानवको स्वभाव हो, विविधतामा रमाउने । त्यसैले त हरेक मानिस घुमफिर गर्न रमाउँछ । नेपालमा बाह्य पर्यटकहरु हिमाल र जैविक विविधता अर्थात प्रकृति, वनस्पती, जनावर, चराहरु आदि हेर्न नेपाल आउँछन् । नेपालमा पाँच हजारभन्दा बढी तालतलैया, दह, कुण्ड, पोखरी र सीमसार क्षेत्र छन् । साना ठूला गरेर नदी, खोला–नालाको सख्या पनि छ हजारभन्दा बढी छन् । देशभरि गरेका अध्ययनका क्रममा पाँच हजार ३ सय ५८ वटा ताल भेटिएका छन् । संरक्षणमा बढी चुनौतीमा रहेका र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण मानिएका अधिकांश ताल उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा रहेका छन् । ती ताल राष्ट्रिय वन, निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष, सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेका छन् । ताल क्षेत्रलाई सीमसार क्षेत्रका रुपमा पनि चिन्ने गरिन्छ । नेपालका तालतलैयालाई एसियाका ‘वाटर टावर’ पनि भन्ने गरिन्छ । यी जैविक र भौगोलिक विविधता नभएको भए यहाँ बाह्य पर्यटकहरु नेपाल आउँदैन थिए होला ?
त्यसै कारण यतिखेर हामी पर्यटन व्यवसाय वा पर्यटन उद्योगबाट मुलुकको विकास हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी भएका छौ । पर्यटन उद्योगको विकास र विस्तारले विदेशी मुद्रा आर्जन हुन्छ र क्रमशः मुलुकको आर्थिक विकास हुन जान्छ । पर्यटन उद्योगको विकास र विस्तारका लागि प्रचार–प्रसारको साथै पूर्वाधार विकासका लागि लगानीको आवश्यक छ । प्रचार–प्रसार एवं पूर्वाधारको विकास हुने हो भने काठमाडौं, लुम्बीनी वा पशुपति दर्शनलाई आएका पर्यटकहरुलाई मुलुकको अन्य पर्यटकीय क्षेत्र सगरमाथा आधार शिविर, रारा ताल वा तिलिचो ताल अवलोकनमा पनि पु¥याउन सकिन्छ । जसबाट उनीहरुको बसाइ एवं खर्चमा वृद्धि हुँदै जान्छ । ठूलो संख्यामा पर्यटकहरु मुलुकमा भित्रिँदा पर्यटन उद्योगमा लगानीको साथसाथै रोजगारी पनि बढ्दै जान्छ ।
पर्यटन क्षेत्रले हामीलाई रोजगारको साथसाथै आयआर्जनमासमेत राम्रो प्रतिफल दिन्छ । पर्यटनबाट लाखौँ मानिसहरुलाई रोजगारी पनि प्राप्त हुन्छ । त्यसले जनताको जीवनस्तरमा पनि ठूलो अन्तर पार्दछ । जहाँ पर्यटनको विकास हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक उन्नतिले फडको मार्दछ । देशको अर्थतन्त्रलाई सफल बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न जरुरी छ । एउटा पर्यटन कुनै ठाउँमा मनोरञ्जनका लागि होस् वा त्यस क्षेत्रको अवलोकन गर्न, जुन कामले गएपनि उसलाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधाहरुमा रकम खर्च गर्नु पर्ने हुन्छ । उसले खर्च गरेको रकमले व्यवसायीको आर्थिक जीवनस्तरमा सुधार गर्नुका साथै देशको आर्थिक उन्नतिमा समेत सहयोग पुर्याउने गर्दछ । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि उच्च विन्दुमा राख्नका लागि सबै भन्दा पहिले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न जरुरी छ ।
नेपालमा पर्यटनको विकासका लागि सरकार र निजी व्यवसायहरुको सहकार्य आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले पर्यटन विकासका लागि गरेका प्रयासलाई सरकारले स्वागत गर्न सक्ने हो भने पनि नेपालको पर्यटन विकासमा सुधार आउन सक्छ । नेपालको पर्यटन विकास र देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ ? यस विषमा सबै निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ । ऐतिहासीक, पुरात्वतिक, तथा धार्मिक महत्व बोकेका पर्यटकीय सम्भावनाका क्षेत्रलाई लगानीको आवश्यकता रहेको छ । नेपालका पर्यटकीय सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउन नसक्नु र पर्यटकको सेवा सुविधा पु¥याउन नसक्दा पर्यटकीय विकास ओझेलमा परेको छ । सरकारले त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यहाँको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ ।
बीसौं शताब्दीका सात्र्र र अस्तित्ववाद
राजेन्द्र भण्डारी असार १०, २०७८
बीसौं शताब्दीका महान् फ्रान्सेली दार्शनिक, नाटककार, उपन्यासकार, पटकथा लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता, जीवनी लेखक थिए, सात्र्र । दर्शन र माक्र्सवादका अग्रणी…
ब्रह्मरुपामा प्राविधिक शिक्षा र चुनौती
मधुसुधन सापकोटा असार ९, २०७८
सूचना प्रविधि र वैज्ञानिक युग, ज्ञान विज्ञानका नित्य नवीन क्षितिज उद्घाटित भइरहने युग हो, विज्ञानका जादूमयी योगदानले विश्वलाई मन्त्र मुग्ध…
ठूलो पानी पर्‍यो कि सम्झिहाल्छु
युवराज खनाल असार ८, २०७८
पाइला पाइलामा चुनौती व्यहोर्ने मान्छेले नै जीवनको मोड लिन्छ र उ ठक्करै ठक्करले खारिन्छ अनि सफल बन्छ । जीवनमा सिधामात्र…
सम्झनामा आत्मीय मित्रहरु
भूपनिधि पन्त असार ७, २०७८
सामान्यतः मित्र भन्ने शब्द गोल बोलीमा प्रकट गरिन्छ । तर काल विभाजन अनुसार तुलना गर्दा बाल्यकालका मित्रहरु क्रमशः बिर्सदै गरिन्छ…
कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध रोटरी अभियान
रविप्रसाद बराल असार ६, २०७८
विश्वमा कोभिड–१९ नपुगेको अब कुनै देश रहेन । हाम्रो मुलुक पनि यतिबेला कोभिड–१९ बाट आक्रान्त बनेको छ । नेपालमा कोरोनाको…